कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा आजदेखि सुरु - Everest Dainik - News from Nepal
कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा आजदेखि सुरु
काठमाडौं, वैशाख १५ । आजदेखि कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा सुरु भएको छ । पहिलो दिन आइतबार अंग्रेजी विषयको परीक्षा भइरहेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार परीक्षाका लागि ४ लाख २८ हजार ५२ जना परीक्षार्थीले फाराम भरेका छन् । सबैभन्दा कम मनाङमा ५९ जना र सबैभन्दा धेरै काठमाडौमा ६२ हजार ५ सय ८८ परीक्षार्थीले फाराम भरेको बोर्डले जनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस कक्षा ११ र १२ को वार्षिक कार्यतालिका, परीक्षा र नतिजा प्रकाशन कहिले ?
यसैबीच प्रश्नपत्रको सुरक्षाका लागि प्रश्नपत्र राखिएको कोठामा सीसीटीभीमार्फत निगरानी गरिएको पनि बोर्डले जनाएको छ । परीक्षामा अनियमितता हुन नदिन यसपटकबाट थप कडाइ गर्ने गरिएको हो । १२ कक्षाको परीक्षा वैशाख २९ गतेसम्म चल्नेछ भने ११ कक्षाको बार्षिक परीक्षा पनि वैशाख २९ गतेबाट नै सुरु हुनेछ ।
याे पनि पढ्नुस कक्षा १२ को नतिजाः कुन जिपिए ल्याउने कति ?
ट्याग्स: national exam board